I-Idyllic Country Retreat Ehlathini Le-Dean - I-Airbnb
I-Idyllic Country Retreat Ehlathini Le-Dean
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Simon
Setha emagcekeni ekhaya elihle lezwe elinokubukwa okumangazayo okufika kude eMfuleni iSevern nangale kwayo. Lena indawo ekahle yokubalekela nokukhululeka ekuphithizeleni kwansuku zonke nokuphila.
Eduze naseChepstow futhi ngokufinyelela kalula kuM4M5 Motorways kanye nokuhamba kwamahora ama-2 kuphela ukusuka eLondon, imizuzu engama-30 ukusuka eBristol kanye nemizuzu engama-40 ukusuka eCheltenham.
Leli fulethi elithokomele lesitudiyo lisanda kuqedwa lasezingeni eliphakeme kakhulu.
Ikhishi elihlome ngokuphelele elingaphansi kwefriji yesiqandisi, iwasha/isomisi, imicrowave, ihhavini, ihhashi, iketela, itoaster, iNespresso cappuccino & espresso maker kanye nebhokisi lesethulo letiye le-Twinings.
I-ayina, ibhodi loku-ayina kanye nesitendi sezingubo.
Ama-TV ahlakaniphile esikrini esicaba endaweni yokuhlala negumbi lokulala. Ifulethi lizuza nge-fiber broadband egcwele enesivinini esifika ku-900 Mbps elungele zonke izinsiza zokusakaza zenethiwekhi kanye nezivakashi ezidinga ukusebenza efulethini.
Irutha ye-4G Wi-Fi nayo iyatholakala mahhala.
Ukushaja kwe-USB kumasokhethi amandla amaningi.
Kuhlinzekwa izinsipho zikanokusho neshampu.
Ukuze nje ngiqinisekise izivakashi ukuthi ngalezi zikhathi ezinzima lapho ifulethi elihlala lihlanzeke kahle lizokhishwa inzalo kuyo yonke indawo ngemva kokubhukha.
Ibekwe egqumeni emaphethelweni edolobhana futhi endaweni enobuhle obumangalisayo futhi nje uhambo olufushane oluya ezweni lethu lendabuko lokushicilela le ndawo ilungele labo abajabulela impilo yangaphandle. Ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukutshuza, ukuhamba ngesikebhe, ukuhamba ngezinyawo nokudoba ngezinye zezinto ezimbalwa ezenziwa yi-Forest of Dean kanye ne-Wye Valley.
Ngiyatholakala nganoma yiluphi usizo noma imibuzo nge-imeyili, umakhalekhukhwini, imibhalo kanye nocingo lwasendlini.